Budata Avetix Antivirus Free maka Windows
Budata Avetix Antivirus Free
Free Budata maka Windows (18.00 MB)
Budata Avetix Antivirus Free,
Enwere ike ịkọwa Avetix Antivirus dị ka mmemme antivirus zuru oke nke emepụtara iji kpuchido sistemụ ndị ọrụ na ngwanrọ ọjọọ. Ihe omume a, nke enwere ike ibudata ya nefu, nwere ike jiri onye ọ bụla chọrọ ichedo kọmpụta nke ha pụọ ​​na ngwanrọ na nje na -emerụ ahụ.
Usoro ihe omume nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru. Emebere atụmatụ ndị a ma mepụta ha nke ọma iji nye nchedo sistemụ zuru oke.
Nyocha miri emi
Nihi njirimara nyocha miri emi nke Avetix, a na -enyocha faịlụ ọ bụla na kọmpụta notu notu wee wepu ihe ndị na -eyi sistemụ ahụ egwu.
Onye ọrụ-enyi na enyi, dị mfe interface
Avetix nwere interface nke edobere ka ọ dị mfe ka onye ọ bụla nwee ike jiri ya mee ihe nụzọ dị mfe. Ịnweta ọrụ enyere dị mfe maka ekele a. Ọbụnadị ndị mmadụ na -ejibighị antivirus na mbụ nwere ike iji mmemme a mebie sistemụ ha.
Njirimara nchedo oge
Avetix, nke na -arụ ọrụ mgbe niile na ndabere, na -enye nchebe na -aga nihu megide mwụpụ nje nwere ike ime. Nụzọ dị otu a, ị nwere ike igbochi ihe egwu nwere ike ime na kọmputa gị mgbe ị na -achọgharị ịntanetị, tupu ha emetụta sistemụ gị.
Avetix Antivirus Free Ụdịdị
Nha faịlụ: 18.00 MB